Uppryckandets kushandurwa | Apg29
Vaya vakafa muna Kristu uchabuda mumakuva avo panguva hwamanda. Ivo ichachinjwa kuva nesu mupenyu.
Kushandurwa achava zvikuru kutsanya. Zvichaitika "pakarepo, pakarepo." Basic chinyorwa yakaratidzwa zvino "mumwe atomo" iro rinoshandurudza se "indivisible nguva," pakarepo (a waibva ofthalmú) "nokukurumidza kupfuura ziso anogona boira."
Isu avo vanotenda uye kuita nguva pakubvutwa kunoitika, pamwe neavo panomuka wakashandurwa. Kushandurwa chichaitika "pakarepo, pakarepo, nehwamanda yokupedzisira." Pauro anonyora pamusoro ichi uye tinoverenga muna KJV, 1 VaKorinde. 15: 51-53:
"Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika: Hatizorari tose, asi tose tichachinjwa, kamwe kamwe, muna nekubwaira kweziso rekupedzisira hwamanda. Nokuti hwamanda icharira, vakafa vachamuka uye tichava kushandurwa. Nokuti ichi chinoora chinofanira kupfeka pacharo pamwe isingaori, uye ichi chinofa chinofanira kupfeka kusafa. "
Apo hwamanda rokupedzisira ichirira, ndiwo chiratidzo kuti vakafa vachamutswa. Vaya vakafa muna Kristu uchabuda mumakuva avo panguva hwamanda. Ivo ichachinjwa kuva nesu mupenyu.
vakagara pasi redu
"Izvi chinoora" rinoreva vaya vakafa, apo "Vakafa" anoreva vaya vapenyu. ? 2 VaK. 5: 1-5 inopa mhinduro:
"Asi tinoziva kana tende kuti ugaro hwedu yepanyika rwakoromoka, saka tine chivakwa chinobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa nemaoko, yekusingaperi iri kumatenga. Nekuti mune iyi tinogomera vanogomera zvakare, uye anoshuva ngavafukidzwe ugaro yedu inobva kudenga, nokuti kamwe tiri vakapfeka mairi hatingawanikwi tisina chatakafuka. Nokuti isu tiri mutende rino anotura mafemo uye makaremerwa, kwete nokuti tinoda kuva tikururwe, asi kufukidzwa pamusoro, saka kuti chinofa chimedzwe neupenyu. Asi iye akatigadzirira kuti ichi ndiMwari, sechokumbofanobata, iye akatipawo Mweya. "
A tende riri zvishoma simba, imwe dikidiki, kwenguva vakagara. In upenyu uzere nemiedzo, isu vanogomera unopanga iyoyo achakurumidza kuva mukati apo Mwari agumisa upenyu pano uye ushe hwake.
Kushandurwa hunorondedzerwawo muna Phil. 3: 20-21
"Asi nyika yedu iri kudenga, kubva apo isu takamirira Muponesi, Ishe Jesu Kristu, uyo anofanira muviri wekuninipiswa kwedu, kuti ivo achafanana muviri wake wokubwinya, nesimba iro anokwanisa kukurira zvinhu zvose."
We anotura mafemo kunetseka kuti vakapfeka yokudenga muviri, iyo kubwinya muviri waJesu kuti. Tariro yedu ndeyokuti usazviparamurira kubvisa uye pachinzvimbo kuwana överkläda isu nokubwinya muviri. Uye ndizvo chaizvo Mwari akatigadzirira. Kana vatsvene akapfeka kubwinya muviri, avo vasiri vatendi kuti kupfeka uye kutakura kunyadziswa. Nokuti tiri zvizvarwa vokudenga, muviri wedu wokubwinya, yenyika inoita iyo tinofanira kutakura munyika yokudenga.